Relax & Thuthuzela
Sierra de Fuentes, Extremadura, Spain
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJuanjo
SinguJavier kunye noJuanjo kwaye sinekhaya losapho olunye kwisiza se-1000 m. eSierra de Fuentes, eneendawo ezinengca kunye nephuli yabucala.
Indlu yahlulwe yazimigangatho emibini ezimeleyo ngokupheleleyo eyohlulwe zizinyuko zangaphandle ezinika ukufikelela kwindawo yakho yokuhlala kunye nedama. Ukufikelela kwisakhiwo kunye neendawo zangaphandle kwabelwana ngazo, kwaye siyakuvuyela ukuba nawe ukufutshane, kodwa kwangaxeshanye, kunye nalo lonke ubumfihlo bokuba kwimigangatho eyahlukeneyo kunye nezimeleyo.
Sikunika indawo yokuhlala epholileyo ebanzi kwaye esebenzayo kwangaxeshanye. Ixhotyiswe nge-air conditioning eyahlula kwigumbi lokuhlala kunye nenye kwigumbi lokulala (zombini ezinokhetho lomoya oshushu ebusika) kunye nokufudumeza ngama-radiator, ubushushu buya kuhlala buthanda.
Unegumbi lokutyela elikhulu elineglasi ebiyelweyo. Kuyo, ikhitshi elidityanisiweyo, eline hob yokungeniswa, imicrowave, umenzi wekofu onedosi enye, itoaster, ifriji kunye nazo zonke izixhobo zasekhitshini kunye netafile yokutyela.
Kwindawo yokuhlala, unokonwabela i-sofa ekhululekile apho unokufunda khona incwadi oyithandayo, ukhangele imagazini okanye usebenzise i-42-intshi ye-LCD SmartTV, kunye noqhagamshelo lwasimahla lwe-ADSL WiFi.
Igumbi lakho likwanegumbi lokuhlambela elipheleleyo elinetreyi enkulu yeshawa enescreen, apho uya kufumana iimveliso zokuhlambela. Kukwakho nomzila wetawuli oshushu ukuze iitawuli zifudumale kwaye zome ebusika.
Igumbi lokulala likhulu kakhulu kwaye liqhakazile, njengoko linefestile enkulu enika ukufikelela ngokuthe ngqo kwigadi. Une-closet enkulu kunye ne-dresser yokugcina imithwalo yakho kunye nebhedi ye-135 cm yokulala ngokuvakalayo kule ndawo yokuphumla.
Kukho igumbi esilisebenzisa njengendawo yokugcina impahla ngaphakathi kwendlu yakho ekuphela kwendawo esihlala ivaliwe.
5.0 · Izimvo eziyi-76
Sise-El Pinar de Sierra de Fuentes edolophini, ngokulambisa i-10 km ukusuka kumbindi we-Cáceres, i-15-minute emfutshane yokuqhuba. Indawo yokuhlala ezolileyo kakhulu, kanye ekungeneni kwedolophu.
E-Sierra de Fuentes kukho iivenkile zokutya kunye neebhari ezithile kwaye, nangayiphi na imeko, unendawo yorhwebo kunye neevenkile ezinkulu ze-Aldi, i-Lidl, i-Dia kunye ne-Mercadona nje i-8 okanye i-9 imizuzu ngemoto ekungeneni kwi-capital yaseCáceres.
Indawo engqonge indlu, ekwindawo yaseLos Llanos de Cáceres kunye neSierra de Fuentes, ilungele uhambo lokuhamba ngebhayisikile okanye ukubukela iintaka, kuba iyindawo yoKhuselo lweeNtaka eziKhethekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Juanjo
Mna noJavier sihlala ngaphezulu kweflethi, ngoko ke nantoni na onokuyidinga siya kukuvuyela ukukunika.
Inombolo yomthetho: AT-CC-00409